Iimali zeeNqununu zeziTywala zivame ukuba ngumthetho weStealth
Eburhulumenteni baseU.S., "abagibeli" ziiindleko ngendlela yemigaqo eyongezelelweyo eyongeziweyo kwiinguqulelo zangaphambili zeebhili okanye izigqibo ezithathwa yiCongress. Ngokuqhelekileyo ukuba nobudlelwane obuncinci kumxholo wesibhaso somzali, abagibeli baqhele ukusetyenziswa njengeqhinga eligxiliweyo elijoliswe ekufumaneni umyalelo wesikhokhwa-mbambano esingaze sidlule xa senziwe ngokwawo.
Abanye abagibeli, ababizwa ngokuthi "ukuhlambalaza" okanye "iipilisi zetyhefu" zisetyenzisiweyo ukuba zingadluliswa, kodwa nje ukuthintela ukuhamba kwebhilidi yomzali okanye ukuqinisekisa ukuba yi- veto ngumongameli .
Abaqhubi abaninzi abaqhelekileyo kwiSeneti
Nangona zizonke kwiiklasi, abagibeli basebenzise kaninzi kwi-Senate. Oku kungenxa yokuba iimfuno zolawulo zeSenates ukuba umxholo womgibeli kufuneka anxulumane okanye "i-germane" kweso sikhokhelo somzali sinyamezele ngaphezu kweNdlu yabameli. Abaqhubi abavumi ukuvunyelwa kwiNdlu, apho izilungiso kwiimithetho-mali zimele zijongane nenkunkuma yebhilidi yomzali.
Uninzi lweMerika liVimba ngokukhawuleza ukunqanda abagibeli
Ama-legislature angama-43 kuma-50 aseburhulumenteni aye avimbela ngokuphumelelayo abagibeli ngokunika abalawuli babo igunya le -veto-item item . Ukukhishwa kubaMongameli baseUnited States yiNkundla ePhakamileyo yase-United States, i-veto ye-line-item evumela ukuba isigqeba senze i-veto into ethile engavumelekanga kwi-bill.
Umzekelo weRider Rider
UMthetho we-ID we-REAL, ogqitywe ngo-2005, wawudinga ukudala into eninzi abantu baseMerika abasoloko bechasene nayo-irejistra yokuzibonakalisa.
Umthetho ufuna ukuba amazwe aveze amaphepha-mvume amasha okuqhuba umqhubi we-high-tech kwaye avimbele i-arhente ye-federal ukuba ayamkele iinjongo ezithile-njengendlela yokukhwela iilayisensi zokuqhuba umqhubi wee-moya kunye namakhadi okuchonga avela kumazwe angahlangabezananga nemilinganiselo encinci yomthetho.
Xa kuqaliswa ngokwalo, UMthetho we-ID WENKCAZELO ufumane inkxaso encinane kwi-Senate engazange ifakwe kwivoti.
Kodwa abaxhasayo bayo baphumelela. Umxhasi-mali, u-James Sensenbrenner (R) wase-Wisconsin, uqhotyoshelweyo njengomgibeli-mthetho kwi-bill ye-post-9/11 yezopolitiko ayengafuni ukuvota, esithi "Ulungelelwaniso, uMthetho woLwabiwo-mali loNcedo loKhuselo, iMfazwe yehlabathi. Ukwesabisa, kunye neTunami yoNcedo. "Le bhili-mali yanikezela imali yokuhlawula imikhosi kwaye ihlawule imfazwe yokhuselo. Bambalwa bavotelwe ngokumalunga nelo mthetho. Umrhumo wenkcitho yomkhosi, kunye ne-ID ye-ID ye-REAL ye-rider edibeneyo, idluliselwe kwiNdlu yabameli ngokuvota kwe-368-58, ngevoti ye-100-0 kwi-Senate. UMongameli uGeorge W. Bush usayine ngomthetho ngoMeyi 11, 2005.
Iimali zeebhilidi zisetyenziswe rhoqo kwi-Senate kuba imithetho yeSenate iyababekezela ngakumbi kunemithetho yeNdlu. KwiNdlu, zonke izilungiso kwiimithetho-mali zimele zixhamle okanye zijongane nesihloko sikhokhelo somzali esicatshangelwayo.
Abaqhankqalazi baninzi baqhotyoshelwe kwiindleko ezinkulu, okanye "iindleko" zeebhilikhwe, kuba ukutshatyalaliswa, ukuvota komongameli okanye ukulibaziseka kwezi bhilidi kunokulibaziseka inkxaso yeenkqubo ezikarhulumente ezibalulekileyo ekukhombiseni urhulumente.
Ngomnyaka we-1879, uMongameli uRutherford B. Hayes ukhononda ukuba abenzi bomthetho basebenzisa abagibeli banokubamba ukuphathwa komphathi ngokugxininisa ekuvunyelweni kwilwayo-mali phantsi kwesigwebo sokuyeka yonke imisebenzi karhulumente.
Iimali zeeRider: Indlela yokukhupha uMongameli
Abaphikisayo - kwaye baninzi-iindleko zeebhankqalazi baye bawagxeba njengendlela yokuba iCongress ixhase uMongameli wase-United States.
Ubukho bomthetho-mboleko onokukhwela banokunyanzelisa abaongameli ukuba benze imithetho abaya kubavusa ngayo xa bethulwe kubo njengemithetho ekhethiweyo.
Njengoko unikezwe ngumgaqo-siseko wase-US, i-veto kamongameli yinto yamandla onke. Umongameli makabe wamkela abagibeli okanye awenqabe ibhajethi yonke. Ngokukodwa xa kuthengwa iindleko zeemali, imiphumo yokubavotela ukuba ikhuphe umrhumo ongenakuphikisana nomntu okhwela umrhumo unokuba nzima. Ngokwenene, ukusetyenziswa kweebhilidi ezikhweleyo kunciphisa kakhulu umongameli we-veto amandla.
Kuthi phantse ukuba bonke abaongameli bathi bakudinga ukulwa neendleko zeebhanki ngamandla e "intetho ye-veto." Into ekhethekileyo ye-veto yayiza kumvumela umongameli ukuba avume amanyathelo akhethiweyo ngaphakathi kwilwayo ngaphandle kokuchaphazela injongo ebalulekileyo okanye ukuphumelela kwilwayo.
Okwangoku, umgaqo-43 wama-50 ase-United States unamalungiselelo avumela abalawuli babo ukuba basebenzise umgca wento.
Ngo-1996, iCongress yadlulisela kwaye uMongameli uBill Clinton wasayina uMthetho woVeto we-Line Item ka-1996 wanika abaongameli base-US igunya le-veto-line item. Ngo-1998, nangona kunjalo, iNkundla ephakamileyo yase-United States yamemezela ukuba isenzo asihambisani nomthetho.
Iimali zeeNkundla zeMali zidibanisa abantu
Njengokuba ukuhambisana nenkqubela yeebhilile kwiCongress akulona nzima ngokwaneleyo, iibhasi zeendleko zingenza kube nzima nakakhulu kunzima.
Ngombulelo weendleko zeendleko zomthetho umthetho othi "Ukulawula iiAples" kunokubonakala ngathi iphela, kuphela ekugqibeleni ukuba yenziwe emva kweenyanga ezinje njengengxenye yomthetho othi "Ukulawula ii-Oranges."
Enyanisweni, ngaphandle kokufunda ngokunyanisekileyo kwimihla ngemihla yeCrowressional Record, abagibeli bangenza ukuhambisana nomgaqo-mthetho ngokungenakwenzeka. Kwaye akufani neCongress yatshutshiswa ukuba iyabonakala ngokucacileyo kwindlela eyenza ngayo umsebenzi wabantu.
Abenzi bomthetho bazisa ii-Bill-Rider Bills
Akunabo bonke amalungu aseCongress esebenzisa okanye axhasa inkxaso yeebhanki.
I-Senator Rand Paul (R - Kentucky) kunye no-Mia Uthando (R - Utah) bobabini bazisa "IsiXhosa esisodwa kwi-Time Act" (i-OSTA) njenge-HR 4335 kwiNdlu nakwi-1572 kwi-Senate.
Njengoko igama layo lithetha ukuba, esinye isiGaba kwiNkundla yexesha siza kufuna ukuba ibhilikhwe nganye okanye isigqibo esithathwa yiNgqungquthela ingamkeli ngaphezu kwesifundo esinye kwaye isihloko saso sonke isiluleko kunye nezigqibo zicacile kwaye zichaze ngokucacileyo umxholo wesilinganiselo.
I-OSTA iya kunika abaongameli ithuba lokubambisa i - veto ngokuvumela ukuba baqwalasele umlinganiselo owodwa ngexesha, kunokuba bathengise i-packed-packed, yonke-okanye-nento "i-package deal".
"Ngaphantsi koopolitiki be-OSTA abayi kuphinda bakwazi ukufihla izifundo zinyani zabo emva kweempawu ezifana ne" PATRIOT Act, "" Protect America Act, "okanye" Akukho Mntwana Okhohlakeleyo Mthetho, "wachaza i-DownsizeDC.org, ekuxhaseni ibhilikhwe. "Akukho mntu ufuna ukutyholwa ngokuvota ngokumelene nokuthanda ubuzwe, okanye ukukhusela iMelika, okanye ukufuna ukushiya abantwana emva koko, kodwa akukho nanye kwezi zihloko ezichazela izihloko zale mabhili."
Indlela uMongameli anyuliweyo ngayo
Yiyiphi i-Grand Bargain?
INkundla Ephakamileyo Ikhulisa Amandla Ezindaweni Eziqhelekileyo
Ibali Elandelwa Ngumxholo "Kilroy Ulapha"
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uGenfield uScott Hancock
I-Heaviest Blues-Rock Bands
I-Green Skateboarding Basics
IiRekhodi Zomhlaba NeeRayibrari
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: Decidere
Ukubulawa kukaYitzhak Rabin
Ixesha leGiologic Time Scale: Eons, Eras kunye namaxesha
Indlela yokudlala i-Chord enkulu kwiGititar
Kuthetha ukuthini i-Cross Cross?
Ukubuza imibuzo yePoliti
Ukudibana neBhokisi ye-Superstar Oscar De La Hoya
Funda inguqulelo yesiNgesi yeNgoma yesiLatin "uBenedictus"
Umthandazo weeNkundla zethu kunye nabagwebi
UMongameli uNixon noVietnamisation
Ucoce iBattery Posts = Uthembekile Ukuqala
Ukhuphiswano lweSizwe kwiSayensi neMathematika